Baarlamaanka Puntland Oo Kala Diray Hay’adda Shaqaalaha Rayidka – Kalfadhi
Kala dirridda waxa Baarlamaanka Puntland u cuskadeen in ay ku heleen hay’adda shaqaalaha rayidka musuq ay ku sameeyeen hannaanka shaqaaleysiinta rayidka ah oo bangiga adduunka uu ka taageero.
Waxa ay sheegeen in baaris ay sameeyeen kaddib ay go’aankan qaateen. Waxayna waqti kooban u qabteen madaxweynaha Puntland si uu usoo magacaabo guddi arrinkaan loo xirsaaro, islmarkaana uu baarlamaanku korjoogteyn doono.
Baarlamaanka ayaana gaaray go’aanno, kaddib kala diristii hay’addan, waxayna sheegeen in ay ka go’antahay la dagaalanka musuqa.
Go’aannada uu Baarlamaanka Puntland gaaray waxaa ka mid ah:-
In xeer loo sameeyo hay’adda, kaasoo oo ay ku shaqeyn doonto hadda kaddib.
Ka hor inta aan xeerka la sameyn shaqada waa In ay sii waddaa wasaaradda shaqada iyo Shaqaalaha.
Madaxweyne C/wali Gaas ayeey ugu baaqeen in uu soo dhiso iyo guddi iyo agaasin cusub islam markaana aysan ku jirin kuwa hadda baarlamaanka Puntland kala diray.
Sidoo kale xeerka shaqaalaha rayidka ah iyo kan guddiga shaqaalaha rayidka ah oo aan horey u jirin ayay dalbadeen in si deg deg ah loo sameeyo.